Izikibha ezinokuphrinta → Imishini efekethisiwe yekhompyutha • I-P & M
Isimanje ukugqokwa kwamakhompyutha Isetshenziselwa ukuhlobisa izinhlobo ezahlukahlukene zezindwangu nezingubo, njengezikibha eziphrintiwe, kanye nezingubo zomuntu siqu ezisetshenziswa emsebenzini nakuzo zonke izinhlobo zemihlangano.
Izembatho ezinokuphrinta zingaba yinto yokukhangisa futhi zisize ekwakheni umkhiqizo wakho. Ukuphrinta kwekhompyutha kufakwa ku- amahembe, amabhulukwe, amasiketi, izigqoko, izingubo zokuvikela nezokusebenza.
Okuvame kakhulu, noma kunjalo izikibha ezinokuphrinta kwakhoezithandwa kakhulu namuhla. Ziyakuvumela ukuthi usebenzise umuntu ngamunye, ngisho nemibono yasekuqaleni yezingubo zakho. Futhi kuyisixazululo esihle sezinkampani, izinhlangano, zonke izinhlangano nabantu abafuna ukusebenzisa izingubo zabo ezinophawu noma umbhalo othile kuzo.
Ngakho-ke okufunwayo okwamanje kuyasebenza, kwesimanje nokwangempela izindwangu zokuhlobisa nezingubo kungenziwa ngendlela ukugqokwa kwamakhompyutha. Izimpawu nemibhalo ebhalwe ngale ndlela iqine ngokwedlulele futhi yinhle ngasikhathi sinye. Ukuhlobisa ngakho-ke kungenziwa kuzo zonke izinhlobo zezinto zokugqoka ngezinhloso ezahlukahlukene, kufaka phakathi izingubo ezimele noma zokukhangisa.
Ihluzo zomuntu ngamunye nokuqina
Amaphethini wangempela aklanywe ngawodwana zidalwe ezindwangu. Indlela efekethisiwe yomshini ikuvumela ukuthi udale inani elingapheli lezimpawu kunoma imuphi umbala owukhethayo.
Ngenxa yemishini yobungcweti, kungenzeka ukuthi wakhe amaphethini ahlukile kuzo zonke izinhlobo zokugqoka nezindwangu ezahlukahlukene usebenzisa indlela efekethisiwe yekhompyutha.
Lokhu kufekethiswa kungasetshenziswa ngempumelelo ukumaka izinhlobo ezahlukahlukene zama-T-shirts okufanele avele kuwo ilogo yenkampani noma inhlangano, umbhalo oqoshiwe noma uphawu olwehlukanisayo.
Lolu hlobo lokuhlobisa luyamelana ngisho nokuwashwa njalo nokusetshenziswa kakhulu kwezingubo. Ngaphezu kwalokho, igcina imibala ekhanyayo kuyo yonke impilo yengubo. Ukugqokwa kwekhompyutha Isebenza kahle kakhulu ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezindwangu, kukotini, izindwangu zokwenziwa, ngisho nasembatho evikelayo noma eboyeni.
Ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje, kungenzeka ukuthi kwenziwe uphawu noma umbhalo wokuqala, ohlukile futhi ohlala njalo ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokugqoka. Kufaka izinhlobo ezahlukahlukene zamahembe wabesifazane nabesilisa, ezemidlalo, amahembe wasemsebenzini noma wansuku zonke.
Izikibha eziphrintiwe ezifekethisiwe zekhompyutha ebonakala ngokusetshenziswa kwemicu esezingeni eliphakeme yokuhlobisa. Lokhu kuqinisekisa ukuqina kwesibonakaliso esenziwe. Ngokusebenzisa kakhulu izingubo nokuwasha njalo, ngisho nasezingeni lokushisa eliphakeme, ikhwalithi ayinciphi.
Izikibha ezinokushicilelwa kwakho zihlala zivezwa ngumklamo wokuqala oyisisekelo sempumelelo.
Izikibha zabesilisa, kanye nezikibha zabesifazane ezinamaprinta, yiqembu lemikhiqizo efunwa kakhulu. Lesi sigaba sezingubo sinendawo ekhethekile ekunikezweni kwethu.
Imifekethiso yekhompyutha isetshenziselwa ukuhlobisa izikibha. Lolu hlobo lwezindwangu zokuhlobisa ludinga ikhono ekwakheni amaphethini, njengoba izinto eziningi kufanele zibhekwe ngesikhathi somsebenzi, okuzoqinisekisa kamuva umphumela ohlukile. Kunezinto eziningana ezibalulekile okufanele zikhonjwe ngenkathi kulungiswa iphrojekthi. Izinga lokuxakaniseka kwephethini lihumusha ekunqumeni kobuningi bezintambo ezisetshenziselwa ukwenza iphethini, i-substrate yempahla kanye nosayizi wophawu oluvelayo.
Inqubo yokwakha ukuphrinta kwekhompyutha iqala ngokwakha idizayini nokukhetha imibala. Esinyathelweni esilandelayo, ukuphrinta kwenziwa endwangwini.
Okuhlangenwe nakho okubanzi ekwakheni imidwebo yekhompyutha kuyisiqinisekiso semiphumela ephelele. Isibonelo se-oda sethulwe ngezansi, kusetshenziswa isibonelo sesikibha esiphrintiwe.
Imibala ehlukahlukene yemicu kanye nobuso obufanele bokufekethiswa kukuvumela ukuthi wenze imidwebo yangempela yangempela. Ubuciko bamakhasimende abazi mingcele, ikakhulukazi ngezingubo ezi-odolwe ngazo zonke izinhlobo zemicimbi ekhethekile nemicimbi.
Amaphethini nemibhalo eyenziwe ekuqaleni ayihlobisi amahembe ezemidlalo kuphela ngamahembe awo wokuphrinta noma ama-polo ane-embroidery yekhompyutha, kepha nezingubo zokusebenza nezokuvikela.
Ukunikezwa kwezikibha eziphrintiwe ezifekethisiwe ngamakhompiyutha kubhekiswe kubantu, izinhlangano, kanye nasezinkampanini ezifuna ukugqama ngezimpahla ezinhle ezibhalwe uphawu lwazo, igama lenkampani noma uphawu lwenhlangano.
5 / 5 ( 16 amavoti )
Ama-t-shirts aprintiwe e-Esgroizikibha ze-decathlon eziphrintiwelapho kushicilelwa izikibhalapho ungathenga khona izikibha eziphrintiwelapho ungathenga khona izikibha ngoshicilelo lwakholapho ungathenga khona izikibha eziphrintiwelapho unga-oda ama-t-shirts ngokuprinta kwakholapho ungenza khona ama-T-shirts ngephrintalapho kungcono uku-oda ama-t-shirts ngephrinta yakholapho uku-oda ama-T-shirts aphrintiwelapho uku-oda ama-t-shirts ngephrinta yakholapho ukwenza ama-T-shirts aphrintiwekubiza malini ukukhiqiza i-T-shirt ephrintiwekubiza malini ukwenza i-T-shirt ephrintiweukugeza kanjani izikibha ezimhlophe eziphrintiweukugeza kanjani izikibha eziphrintiweungawashayela kanjani ama-T-shirts aphrintiweungawenza kanjani ama-T-shirts aphrintiweungawenza kanjani ama-t-shirts ngephrintaukusebenzisa izikibha eziphrintiweizikibha zabesifazane eziphrintiweizikibha zabesifazane ngokuprinta kwakhoizikibha zezingane ezinokuphrintaukusebenzisa izikibha eziphrintiweIzithelo zama-loom t-shirts eziphrintiweizikibha zezokwelapha eziphrintiweizikibha zamadoda eziphrintiweizikibha zamadoda ezinokuphrinta okungu-3damahembe webhola ngokuprintaamajezi ebhola ngokuprinta kwakhoShizi wepolo ngephrintaizikibha zomsebenzi ngephrintaizikibha zezemidlalo eziphrintiweizikibha zezemidlalo zokuphrinta kwakhoAma-T-shirts ama-Thermoactive aprintiweIzikibha eziphrintiweizikibha eziphrintiwe 3dIzikibha eziphrintiwe ze-etigroT-shirts nokufakwa kweBiałystokizikibha ezinama-prints abesifazaneizikibha eziprintiwe izinganeIzikibha eziphrintiwe ze-GdańskIzikibha eziphrintiwe lapho ungathenga khonaIzikibha eziphrintiwe lapho uku-odaizikibha eziphrintiwe ukuthi zenziwa kanjaniIzikibha ezinemisipha efana nobaba, indodanaT-shirts ngephrinta yaseKatowiceT-shirts ngephrinta yaseKrakakizikibha eziphrintiwe ngesikebheIzikibha eziphrintiwe neLublinizikibha eziprintiwe amadodaizikibha ezibhaliwe ngokwezifisoAma-T-shirts anama-olsztynT-shirts nge poznań ephrintiweIzikibha ezinokuphrinta uquqabaAma-T-shirts anemisipha ephrintiweIzikibha ezinephrinta yaseWarsawIzikibha ezinombhalo wakho uqoboIzikibha ezinombhalo we-wrocławIzikibha ezinokuphrinta kokushisekela izweizikibha ezinokuphrinta kwakhoIzikibha ezine-allegro yakho uqoboT-shirts ngeKrakow yakho ephrintiweIzikibha ezinezimpawu zakho zokuphrinta poznańIzikibha ezinokuphrinta kwakho ezishibhileIzikibha ezinombhalo wakho we-warszawaAma-T-shirts akho siquizikibha ezihlekisayo eziphrintiweizikibha ezishibhile eziphrintiweizikibha ezishibhile ezinokuphrinta kwakho
Bona ezinye izindatshana:
28 Okthoba 2020
Ukuphrinta kwe-DTG, ukumaka kusuka kucezu olulodwa
Ukufakelwa kwamakhompyutha - kuyini?